တင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်ကဘာလဲ၊ အဲဒါကိုဘယ်လိုခိုင်ခံ့စေမလဲ Bezzia
တောရက်စ် | 13/10/2021 23:55 | ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ
မိခင်များဖြစ်သောအမျိုးသမီးများအတွက်တင်ပါးဆုံခင်းအကြောင်းအများကြီးပြောကြပေမယ့်ဒီအစိတ်အပိုင်းကိုအားကောင်းအောင်လုပ်ဖို့ဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာနည်းနည်းပြောကြတယ်။ အမျိုးသမီးတိုင်းသည်ခြွင်းချက်မရှိဘဲသူတို့၏တင်ပါးဆုံ၌ကိုယ်ဝန်မဆောင်ရလျှင်တောင်မှအလုပ်လုပ်သင့်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဤဧရိယာရှိကြွက်သားများသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအားနည်းလာသည် ၎င်းသည်ဆီးယိုစိမ့်ခြင်းကဲ့သို့ပြဿနာများ၏အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်သည်။
တင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်သည်ကြွက်သားများနှင့်အရွတ်များဖြစ်သည် ဝမ်းဗိုက်အောက်ပိုင်းတွင်တွေ့ရသည်။ ၎င်းတို့သည်ဆီးအိမ်၊ ဆီးအိမ်၊ သားအိမ်နှင့်စအိုကဲ့သို့တင်ပါးဆုံတွင်းအင်္ဂါများကိုထောက်ပံ့ရန်တာဝန်ရှိသည်။ ဤအင်္ဂါများကိုကောင်းစွာလည်ပတ်နိုင်ရန်၎င်းတို့ကိုသင့်တော်သောအနေအထားတွင်ထားရှိရမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်တင်ပါးဆုံတွင်းကြွက်သားများဖြစ်သည်။
တင်ပါးဆုံကြမ်းပြင်အားပျော့သွားသောအခါအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်လာသည့်အရာသည်အလိုအလျောက်အလုပ်လုပ်သည် အခြားသူများတွင်ဆီးယိုစိမ့်မှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၊ ကြာရှည်ခြင်း၊ သို့မဟုတ်ခါးနာခြင်း ဒါကြောင့်ဒီလိုမဖြစ်ပွားရအောင်တင်ပါးဆုံတွင်းကိုဂရုစိုက်ကာကွယ်ဖို့နဲ့ခိုင်ခံ့ဖို့အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။
သင့်တွင်တင်ပါးဆုံကြွက်သားများနှင့်အရွတ်များအားနည်းလျှင်ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်းကဲ့သို့လက္ခဏာအမျိုးမျိုးကိုခံစားရနိုင်သည်။ အလွန်ထူးခြားသောအရာနှင့်သတိပြုမိရန်လွယ်ကူသောအရာဖြစ်သည် ဆီးယိုစိမ့်မှုကိုသင်မထိန်းချုပ်နိုင်ပါချောင်းဆိုးခြင်း၊ ရယ်ခြင်း (သို့) ရယ်ခြင်းတို့၌အားနည်းသောတင်ပါးဆုံတွင်း၏သိသာထင်ရှားသည့်လက္ခဏာအနည်းငယ်ရှိသည်။
တင်ပါးဆုံတွင်းပြသနာများကိုသင်ခွဲခြားသိနိုင်သောအခြားလက္ခဏာများမှာလိင်ဆက်ဆံစဉ်နာကျင်ခြင်း၊ ကျောအောက်ပိုင်းနာကျင်ခြင်းနှင့်ကြာလာလျှင်ပင်၎င်းသည်စအိုကဲ့သို့ကြွက်သားများပံ့ပိုးပေးသောကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများရွှေ့ပြောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဤလက္ခဏာများသည်အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်အချိန်မလွန်စေသင့်ပါ၊ နည်းနည်းလေးပြသောလက္ခဏာနှင့်သင့်တင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်အခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ရန်သင်၏ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပါ။
တင်ပါးဆုံတွင်းအားကောင်းလာစေရန်ကုထုံးအမျိုးအစားများစွာကိုသုံးနိုင်သည်။ သင်ဆိုးရွားသောပြသနာတစ်ခုခံစားနေရပါကပထမ ဦး ဆုံးရွေးချယ်မှုမှာဤကိစ္စတွင်အထူးပြုလုပ်ထားသောကာယကုထုံးရှိရန်ဖြစ်သည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင်ကိုယ်တိုင်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားရင်းနောက်ထပ်ပျက်စီးမှုတွေကြုံရနိုင်တယ်။ အသေးငယ်ဆုံးကိစ္စများတွင်ကြိုတင်ကာကွယ်သည့်အနေနှင့်ပင် အောက်ပါကဲ့သို့အခြားနည်းလမ်းများရှိသည်.
Kegel လေ့ကျင့်ခန်း- ဤလေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးအစားများသည်တင်ပါးဆုံတွင်းကြွက်သားများကိုအလုပ်လုပ်ရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသောကြောင့်၎င်းတို့သည်ခန္ဓာကိုယ်ရှိအခြားကြွက်သားအမျိုးအစားများကဲ့သို့အားကောင်းလာစေရန်လုပ်ဆောင်သည်။ Kegel လေ့ကျင့်ခန်းများအတွက် တရုတ်ဘောလုံးများသို့မဟုတ်လေ့ကျင့်ခန်းကဲ့သို့ကိရိယာများကိုသုံးနိုင်သည် Kegelမရ။ ဤလေ့ကျင့်ခန်းများဖြင့်သင်၏ကြွက်သားများကိုသန်မာစေပြီးတင်ပါးဆုံတွင်းလုပ်ဆောင်ချက်ကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။
ယောဂ အချို့ယောဂကျင့်စဉ်များ (သို့) asanas များသည်တင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်အတွက်အလုပ်လုပ်ရန်ပြီးပြည့်စုံသည်။ မင်းရဲ့အထူးကိစ္စအတွက်အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုရှာဖို့အထူးကုနဲ့တိုင်ပင်ပါ။ တင်ပါးဆုံတွင်းကိုအလုပ်လုပ်ကတည်းက မပျက်စီးလျှင်၎င်းသည်ဆန့်ကျင်ဘက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သည်.
သက်ရောက်မှုနည်းသောလေ့ကျင့်ခန်း- ခုန်ခြင်း (သို့) ရုတ်တရက်လှုပ်ရှားမှုများမပါ ၀ င်သောကိုယ်ခန္ဓာကိုထိခိုက်စေခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဤကိစ္စတွင်အမျိုးသမီးများအတွက်အကောင်းဆုံးအားကစားများမှာ ရေကူးခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း၊ လမ်းလျှောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဘဲဥပုံစီးခြင်း.
ကြိုတင်ကာကွယ်မှုအချို့ကိုစဉ်းစားရန်လည်းအလွန်အရေးကြီးသည်။ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကိုကောင်းကောင်းထိန်းနည်း၊ ကာယလေ့ကျင့်ခန်းမှန်မှန်လုပ်ပါ၊ ကောင်းမွန်သောအိမ်သာအလေ့အထရှိပါစေ၊ အမျှင်ဓာတ်ပါသောအစားအစာကိုစားပါ မှန်ကန်သောအူလမ်းကြောင်းပြောင်းရန်၊ အထူးသဖြင့်ထိုင်ပြီးသက်ရောက်မှုနည်းသောလှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်သည့်အခါကောင်းမွန်သောကိုယ်ဟန်အနေအထားရှိရမည်။
တင်ပါးဆုံတွင်းအားပျော့စေနိုင်သောအန္တရာယ်အချက်များရှိပါသည်သဘာဝမီးဖွားခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း၊ အ ၀ လွန်ခြင်း၊ သက်ရောက်မှုမြင့်သောအားကစားများလေ့ကျင့်ခြင်း၊ နာတာရှည်ဝမ်းချုပ်ခြင်း၊ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများသို့မဟုတ်ခွဲစိတ်မှုသို့မဟုတ်သားဖွားမီးယပ်ကုသမှုခံယူခြင်းကဲ့သို့။ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းသည်နေ့စဉ်နှင့်အမျှကြီးမားသောအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သောပြဿနာကိုဆန့်ကျင်ရန်အကောင်းဆုံးကိရိယာဖြစ်သည်။ သင်၏ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်ပြီးဤပြဿနာကိုပိုမိုဆိုးရွားမသွားမီအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းကိုရှာပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » ကျန်းမာခြင်း » ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ » တင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်ကဘာလဲ၊ အဲဒါကိုဘယ်လိုခိုင်ခံ့စေလဲ